Magetsi Bhazi Mhepo Inodzora Vagadziri & Vatengesi - China Magetsi Bhazi Mhepo Inodzora Fekitori
ESA nhepfenyuro nyowani nyowani simba bhazi mhepo kutonhodza rudzi rwemhando yedenga yakakwidzwa mhepo inotonhodza, ine imwechete mhepo inodzoka nzvimbo, uye nemhando dzakasiyana dzekunyorera emabhazi emagetsi kubva 6m kusvika 8m.
LMD yakateedzana nyowani nyowani simba bhazi mhepo kutonhodza rudzi rwemhando yedenga yakakwidzwa mhepo yekugadzirisa, ine imwechete mhepo yekudzoka nzvimbo, uye nemhando dzakasiyana dzekunyorera emabhazi emagetsi kubva 8m kusvika 12m. Iyo LMD nhepfenyuro inotsigira neakasiyana tekinoroji tekinoroji, senge Cloud kudzora tekinoroji, iyo yepamusoro-voltage yekubatanidza anti-kusunungura tekinoroji, iyo yedenga unit yakasanganiswa bhatiri thermal manejimendi manejimendi system (BTMS) tekinoroji, mota yekupisa yekupisa manejimendi tekinoroji, iyo DC750 yakakwira voltage technology, iyo condensation yekudzora mvura tekinoroji, iyo mweya yekuchenesa tekinoroji mukati mebhazi uye simba-rinoponesa aruminiyamu chiwanikwa compressor.
Ndokumbira kuti ubate nesu pa sales@shsongz.cn kuti uwane rumwe ruzivo.
ESD yakateedzana nyowani nyowani simba bhazi mhepo kutonhodza rudzi rwematenga edenga rakagadziriswa mweya wekugadzirisa, aine akasiyana mamodheru ekunyorera emagetsi mabhazi kubva 8m kusvika 12m. Iyo ESD nhepfenyuro inotsigira neakasiyana tekinoroji tekinoroji, senge Cloud yekudzora tekinoroji, iyo yepamusoro-voltage kubatana anti-kusunungura tekinoroji, iyo yedenga unit yakasanganiswa bhatiri thermal manejimendi manejimendi system (BTMS) tekinoroji, mota yekupisa manejimendi manejimendi tekinoroji, iyo DC750 yakakwira voltage tekinoroji, iyo condensation yekudzora mvura tekinoroji, iyo mweya yekuchenesa tekinoroji mukati mebhazi uye simba-rinoponesa aruminiyamu chiwanikwa compressor.
Icho chigadzirwa chine compressor, condenser, yakaoma firita, yekuwedzera vharuvhu, evaporator, pombi uye zvemagetsi zvikamu.
Izvo zvigadzirwa zvakakamurwa kuita akati wandei mamakisi zvinoenderana akasiyana mamodheru uye saizi yezvakaenzana zvikamu. Zvinoenderana nechimiro, ivo vanonyanya kupatsanurwa kuita chakabatana mhando uye rakakamurwa mhando.
SONGZ yekuchenesa mweya uye disinfection system rudzi rwekupedzisira hutachiona kuuraya mudziyo, ine basa reantivirus, sterilizer, VOC firita uye PM2.5 firita.